किम जोङ उनले मिसाइल बैज्ञानिकहरुलाई दिए यस्तो निर्देशन,तेस्रो विश्व युद्धको खतरा बढेकै हो त ? - samayapost.com
किम जोङ उनले मिसाइल बैज्ञानिकहरुलाई दिए यस्तो निर्देशन,तेस्रो विश्व युद्धको खतरा बढेकै हो त ?
समयपोष्ट २०७४ भदौ २५ गते ७:३२
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले उक्त देशले हालै गरेको क्षेप्यास्त्र परीक्षणको काममा निकै ठूलो सफलता हात पारेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले यसलाई आफ्नो देशको ठूलो सफलता हो भन्दै यसप्रति सिंगो देशले नै गर्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उत्तर कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरुले आइतबार सो जानकारी दिएका छन् ।
उनले ती बैज्ञानिकहरुलाई विशेष धन्यवाद पनि ज्ञापन गरेको उत्तर कोरियाली सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुले जानकारी दिएका पछिल्लो समाचारमा जनाइएको छ ।
उक्त रात्रिभोजसँगै उनले मिसाइल बैज्ञानिकहरुलाई आगामी दिनमा थप हतियारको विकासका लागि पनि निर्देशन दिएका छन् । उनले अझै शक्तिशाली हतियार र क्षेप्यास्त्र निर्माणका लागि निर्देशन दिनुभएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
एक फ्रान्सेली पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्तामा उहाँले यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा एकता हुनपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भनेका छन्– यो हतियारको प्रदर्शन हो र यसले संसारमा कहीँ पनि र कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन, अबका दिनमा उत्तर कोरियालाई नाकाबन्दी लगाउने वा कारबाही गर्ने विषयमा सबै मिलेर सर्वसम्मत निर्णय नै गर्नुपर्छ ।